ယီမင် စစ်တပ် ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်း | Freedom News Group
ယီမင် စစ်တပ် ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်း
by FNG on March 21, 2011	ယီမင် ကာကွယ်ရေး စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်း
စနေ နေ့ က ဆန္ဒပြသူများ ကို ပစ်ခတ် ခဲ့ရာ အနည်း ဆုံး လူငါးဆယ် သေဆုံး ရမှု အတွက်
နိုင်ငံ တကာရှိ ယီမင် သံတမန် လေးဦး က လက်ရှိ ရာထူးများမှ နှုတ်ထွက် သွားခဲ့သည်။
ယီမင် မြို့ တော် ဆာနား တွင် စခန်းချထား သည့် အတိုက် အခံ များ ကို ဖြိုခွဲရန် ယီမင် အစိုးရက
Yemen’s ambassador to Saudi Arabia, Mohammed Ali al-Ahwal, announces his support for the protest movement calling for the ouster of president Ali Abdullah Saleh. Ahwal told AFP news agency by telephone:
I announce my support for the youth revolution, and for change in Yemen
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Tags: Agence France-Presse, Ali Abdullah Saleh, Lahij, Tawaf, Yemen	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← နေပြည်တော်တွင် ပြည့်တန်ဆာ စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်
လူထုအုံကြွမှုကို လန့်ပြီး ဂျီမေးလ်အီးမေးလ်စနစ် တိုက်ခိုက်ပိတ်ပင်သော တရုတ် ကို ဂူးဂဲလ်ပြစ်တင်ဝေဖန် →
မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေသိအေင် ပြည်ပ ရေဒီယိုကနေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသိပေးလို့ရပါတယ်။
March 22, 2011	ဒါပေမဲ့	#
ခင်ဗျာတို့ ပြောတာတွေမှန်ပါတယ်……………..ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာတို့ ပြောတာတွေကို မြန်မာပြည်က စစ်မှု့ ထမ်းတွေဖတ်လို့ မရဘူးလေ သူတို့ ဘယ်လိုသိအောင် လုပ်ပေးလို့ ရမလဲ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို ဘယ်လိုကြည့်လို ရမလဲ စဉ်းစားကြိုးစားပေးရပါမယ်။
March 22, 2011	ချိန်တန်ပြီ	#
အမှန်ပါပဲ… ဒီအချက်ဟာ အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ… သတင်းအချက်အလက်ကို သူတို့အထဲ စိမ့်ဝင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်… ကျွန်တော်တို့လဲ တတ်နိုင်သလောက် ဖြန့်နေပါတယ်… ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း တတ်နိုင်သလောက် နီးစပ်ရာသူတွေကို ပြောပြကြပါ… ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုးတွေ ပူးပေါင်းရသလဲဆိုတာကို အမြင်လေးတွေနဲ့ ယှဉ်ထိုးပြီး ပြောပြပေးကြပါ… စာရွက်စာတမ်းဖြန့်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်… ပါးစပ်ကနေတဆင့် ဖြန့်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်… စစ်တပ်ရဲ့ အောက်ခြေအဆင့်အထိ သိဖို့အတွက် လက်လှမ်းမှီသလောက် ပြောပေးကြပါ….
March 22, 2011	ဘိုး တော်	#
” ကျွန်တော် ဟာ ကျွန်တော့် ပြည်သူ တွေ ကို အကာအကွယ် ပေး ဖို့ စစ်တပ် ထဲ ၀င်ရောက်ခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့် ပြည်သူ ကို အကာ အကွယ်ပေး ဖို့အချိန် ရောက်ပြီ ”
ကြိုက် တယ် ဗျာ!
မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အစွမ်းအစဖေါ်ပြကြပါ… ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေဘက်က တကယ်ရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုတာ သက်သေပြကြပါ… တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်းနှစ်သည်းခြာ သားရတနာတွေပါ… ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေတာကို လျစ်လျူရှုမထားပါနဲ့… အခုအချိန်မှာ စစ်သားဆိုရင် ပြည်သူတွေက နှာခေါင်းရှုံ့ချင်နေကြတာပါ… ဒါတွေဟာ အထက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြောင့် ဖြစ်နေရတာပါ… တပ်မတော်သားတိုင်း သူတို့လို စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိမယ်လို့ မယူဆပါဘူး… တကယ်အရေးကြုံလာရင် ပြည်သူတွေဘက်က မားမားမတ်မတ်ရပ်ပါ… တပ်မတော်သားကို ပြည်သူတွေက အမြဲတမ်းလေးစားနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးကြပါ… ကျွန်တော်တို့ အဖေတွေခေတ်က စစ်သားဖြစ်ချင်လို့ ၀င်ခွင့်ဖြေတာကျတဲ့အတွက် တချို့ဆို ငိုတောင်ငိုတယ်လို့ ကြားသိမိပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အတင်းအကျပ်သွတ်သွင်းနေတာကိုတောင် ထွက်ပြေးနေကြပါတယ်… ဒါတွေကို ကြည့်ရင် တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ ဘယ်လောက်အထိကျဆင်းနေတယ်ဆိုတာ သိသာမှာပါ… တပ်မတော်ဟာ တကယ်အရေးအကြောင်း ကြုံလာရင် ပြည်သူတွေဘက်က မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ် ပေးတယ်ဆိုတာ လုပ်ရပ်နဲ့ သက်သေပြကြပါ…
March 21, 2011	Lai	#
မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း အနည်းဆုံး ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ်။ စစ်သား တွေ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ခံစားနေကြတယ် ဆိုတာ သူတို့ဟာ သူတို့အသိဆုံးဘဲ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ပွဲ ဆိုတဲ့ ဟာ ကမုန်း စရာ အကောင်း ဆုံးဘဲ။
March 21, 2011	htin kyaw	#
Good Job!Well done.I do support for the peoples & army who are actually fight for their freedom.How about Burmese Army?Which way they want to choose?Still to live dictator slave or patriotic peoples Army.
March 21, 2011	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,729,051 hits